अोली सरकारलार्इ सय दिनमै धक्का लाग्ने, झिना मसिनाकाे घातले के होला? – PathivaraOnline
Home > समाचार > अोली सरकारलार्इ सय दिनमै धक्का लाग्ने, झिना मसिनाकाे घातले के होला?
काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लागाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । यी दुई मधेशवादी दलले संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा फिर्ता, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग सरकारले पूरा नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका हुन् ।
राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए ।
‘एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा मधेशवादी गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन दिनुका सार्थ संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनका झूठा मुद्दा फिर्ता, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग सम्बोधन गर्न आश्वासन दिएको थियो, सोही कारणले मधेशवादी दलले समेत वाम गठबन्धनको समर्थन गरेको हो’, सहअध्यक्ष कर्णले भने, ‘तर माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर भएन भने हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य हुनेछौं ।’
तस्करीकाे यस्तो बिगबिगीः भारतीय भ्यानबाटै यसरी गरिन्छ नेपालमा तस्करी